umlingo: indawo yokuhlanganisela ngaphandle ngoku kuGoogle ukudlala ukufikelela kwangoko kwezixhobo ezikhethiweyo ze-android
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Umlingo: Indawo yokuQokelela ngoku kwiGoogle Play yokuFikelela kwangoko kwezixhobo ezikhethiweyo ze-Android
Umlingo: Indawo yokuQokelela ngoku kwiGoogle Play yokuFikelela kwangoko kwezixhobo ezikhethiweyo ze-Android
Ngokungathandabuzekiyo umdlalo wekhadi owaziwayo kakhulu, uMlingo: Ukuqokelela kuza kwiselfowuni, njengoko besikhe saxela ngaphambili . Oosiyazi boNxweme kutshanje baveze ukuba uMlingo: Indawo yokuhlangana ngoku iyafumaneka simahla kwi Google Play Ukufikelela kwangoko izixhobo ezikhethiweyo ze-Android.
Umdlalo uza kuza kwiipilisi ze-Android, ezinye izixhobo ze-Android, kunye neVenkile yeApple kamva kulo nyaka, ke ukuba i-smartphone yakho ye-Android ayikahambelani nomdlalo, kuya kufuneka ulinde ngomonde iinyanga ezininzi.
Eyona nto inomdla malunga nokukhutshwa, ngaphandle kwento yokuba ungalikhulisa ingqokelela yekhadi lakho ngelixa usendleleni, yinto yokuba ibandakanya inkxaso yeqonga. Oku kuthetha ukuba abadlali banokusebenzisa ukungena kwiAkhawunti efanayo yamaWizard kuwo onke amaqonga, kubandakanya neWindows PC okanye neMac OS.
Elinye inqaku elibalulekileyo kukunxibelelana okutsha okulungiselelwe ngokupheleleyo ukuxhasa ubungakanani bescreen esincinci, kunye nokuthinta okusekwe kukuchukumisa. Oku kubandakanya izinto zentlalo ezinje ngeLuhlu loMhlobo kunye neMiyalezo yomdlalo ongaphakathi-ngaphakathi, kodwa ayinalo ibhodi esecaleni ngexesha loyilo.
Ngoku, owona mbuzo ubaluleke kakhulu: zeziphi izixhobo ze-Android ezihambelana noku kukhutshwa? NgokwamaWebhu oNxweme, uya kufuna i-smartphone eqhuba i-Android 6.0 okanye entsha kunye ne-4GB ye-RAM okanye nangaphezulu. Nangona kunjalo, ii-apos azanele ngokwaneleyo ukuba zingadlala uMlingo: Indawo yokuqokelela kwi-smartphone yakho ye-Android. Ifowuni yakho kufuneka ixhaswe yenye yezi chipets zintathu okanye ngaphezulu: Kirin 970, IQualcomm Snapdragon 845 , kunye Isamsung Exynos 9810 . Kubalulekile ukuba ukongeze ukuba umdlalo awusixhasi isisombululo sesixhobo esingu-4: 3.
Ukwenza ukuba icace gca, nazi ii-smartphones eziqinisekisiweyo ukuba zixhasa uMlingo: Indawo yokuqokelela, nangona oko kungatsho ukuba abanye banokuxhasa umdlalo nawo, wena & ampos; kuyakufuneka uzame ngokwakho:
Asus ROG Ifowuni 3, Asus ROG Ifowuni II, Google Pixel 3, Hlonipha Dlala 4, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 30 Pro 4G / 5G, Huawei P20 Pro, Huawei P30 Pro, LG G7 ThinQ, Motorola One 5G, OnePlus 6T, I-OnePlus 7 Pro, i-OnePlus 8, i-Oppo Reno 3 Vitality, i-Oppo Reno3 5G, i-Realme v3, i-Redmi 10X Pro 5G, iRedmi K30 5G racing, i-Samsung Galaxy A71 5G, i-Samsung Galaxy Qaphela i-9, i-Samsung Galaxy S10, i-Samsung Galaxy S10 + 5G, i-Samsung Galaxy Qaphela i-10 +, i-Samsung Galaxy S9, i-Samsung Galaxy S20 Ultra, i-Sony Xperia XZ2, i-Sony Xperia XZ3, iVivo Y70s, kunye neXiaomi Redmi K30 Ultra.
I-fitbit ionic vs izixhobo s3
Qaphela i-9 yokukhutshwa komhla wenguqulo
I-Apple iPhone SE (2020) vs iPhone 11 vs iPhone XR
I-AT & T ikhuphe ulwazi olulahlekisayo kwiveki ephelileyo malunga nokuphathwa kwayo kwe-California kunye ne-apos;
Ngequbuliso i-iPhone yakho endala ixabisa kancinci xa uyithengisela entsha
Eyona meko ilungileyo ye-Apple iPad Air 4 kunye nezembozo
Isamsung kunye neapos entsha yokutshaja ngaphandle kwamacingo (kwi-Galaxy S6 kunye nomda we-S6) ukubiza $ 59
Ayisiyo itypo: Gcina i $ 50,000 kule 8K Samsung Smart TV
Imisele ye-T-Mobile i-Samsung Galaxy S10 +, ibonelela ngeentengiso kwi-S10 nakwi-S10e
I-Apple ityhila ngokusemthethweni i-iPhone 12 Pro kunye nePro Max